Chautari Daily » छवि र शिल्पा बिच अब के हुन्छ ? माताको डरलाग्दो भविष्यवाणी ( भिडियो )
छवि र शिल्पा बिच अब के हुन्छ ? माताको डरलाग्दो भविष्यवाणी ( भिडियो )
काठमाडौँ । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजुरी गरेपछि माहोल गर्माएको थियो । तर गत बिहिबार निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरलेबिच महानगरीय प्रहरी परिसर,टेकुमा सहमति भएको थियो ।
शिल्पाले घरेलु हिं*सा भएको भन्दै काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा पति छविराज ओझा विरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् । छवि र शिल्पाले विवाह भएको लुकाउँदै आएका थिए । एकाएक डिर्भाेसको खबर आउँदा माहोल निकै तातेको थियो । छविराज ओझाकी शिल्पा चौथो श्रीमती हुन् । उनले ओझाले निर्माण गरेको फिल्म ‘लज्जा’बाट चलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन् ।
छबी र शिल्पाको विषयले सामाजिक संजालमा निक्कै ठुलो क्रिया प्रतिक्रिया पनि चलेको छ । यसै बीच छबी र शिल्पाको सम्बन्ध र भविष्यको विषयमा आफ्नो बिचार राख्न सबिता माता मिडियामा आएकी छन। उनिसंग गरिएको पुरा कुराकानी हेर्नुहोस :
प्रकाशित मिति ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:१२